October 15, 2021 - ApannPyay Media
မိဘတွေအနားမရှိတဲ့ ပြေသုဒြာလေးရဲ့မွေးနေ့လေးကို အလိုချင်ဆုံးဆုလေးကိုပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
October 15, 2021 by ApannPyay Media
မိဘတွေအနားမရှိတဲ့ ပြေသုဒြာလေးရဲ့မွေးနေ့လေးကို အလိုချင်ဆုံးဆုလေးကိုပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်သင်းကြည် အနုပညာလောကမှာအကောင်းဆုံး ဖျော်ဖြေမှုေ လးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုအမြဲပျော်ရွှင်စေခဲ့သူကတော့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးခိုင်းသင်းကြည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဖြူစင်ပြီးရိုးသားတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေ ယနေ့တိုင် ချစ်မဝကာ အားပေးနေကြတာဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မခိုင်လေးကလည်း သူ့ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကို ယနေ့တိုင် တက်စွမ်းသမျှအနုပညာတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေပေးနေဆဲပါပဲနော်။အခုလည်း မခိုင်လေးက ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ အူဝဲရဲ့ သမီးလေး သုသု ရဲ့ မွေးနေ့လေးကို အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းေ ပးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ မိဘနဲ့ ခွဲခွာနေရရှာတဲ့ သုသုလေးကို ချစ်ရတဲ့ မေမေဖေဖေနဲ့ အတူ ပြန်ဆုံနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းစကားလေး ဆိုထားပါသေးတယ် ။မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးကတော့ ” Happy Birthday သမီးလေးသုသုရေ ပညာတက်ကြီးဖြစ်ပါစေ၊ဖေဖေမေမေတို့နဲ့လည်းအမြန်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ပါစေနော်” ရေးသားထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ … Read more
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့တန်တဲ့ယောက်ျား မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိသေးဘူးလို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့တန်တဲ့ယောက်ျား မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိသေးဘူးလို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည် ဒါဟာ Miss ပြိုင်ပွဲကို တကျော့ပြန်လည် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်း အားလုံးကမျှော်လင့် ထားသလိုပဲ Miss Golden Land Myanmar 2018ပြိုင်ပွဲရဲ့Winnerဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရွှေအိမ်စည်ကတော့ Miss အလှမယ် မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပါ ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ ကျော့ရှင်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့သူမရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာတွေက ပရိသတ်တွေကြားမှာ အတော်လေးကို ရေပန်းစားပါတယ်။ ရွှေအိမ်စည်ကတော့ စကားပြောရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်ပြီး သူမကိုအမျိုးသားပရိသတ်ထက် အမျိုးသမီး ပရိသတ်တွေက ပိုမိုသဘောကျ အားပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ရွှေအိမ်စည်က အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးလာခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို ခုလိုပဲ ခတ်ချေချေလေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အိမ်စည် အတွက် ခုချိန်ထိမြန်မာမှာ ချစ်ရမဲ့သူလည်းမရှိသေးသလို တွေ့ဘူးတဲ့ အမျိုးသားတိုင်းက အိမ်စည်အတွက် လိုချင်ပုံစံမျိုး ရှိမနေဘူးပြောပြရမယ်ဆိုတော့ ရှင်းရှင်းပဲ … Read more
စားမိရင် ရူးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ ပဒိုင်းသီးအကြောင်း သိစရာများ
စားမိရင် ရူးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ ပဒိုင်းသီးအကြောင်း သိစရာများ ပဒိုင်းသီးကို Datura metel/Jimson weed/devil’s trumpet စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်တွင်ကြတယ်။ ဒီအပင်ဟာ သဘာဝအလေ့ကျပေါက်တဲ့အပင်ဖြစ်သည့်အလျောက် တစ်ပင်လုံးဟာ လူနှင့်အခြားသော တိရိစ္ဆာန်တွေကို သေစေနိုင်တဲ့( tropane alkaloids) အဆိပ်ရှိပါတယ်။ အယ်လ်ကာလွိုက်(alkaloid)ဆိုတာက သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေသော အဆိပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူ့ကို အပင်တွေကနေတဆင့် ထုတ်ယူရရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ ပဒိုင်းသီးမှာ အယ်လ်ကာလွိုက် အဆိပ်များစွာ ရှိပါတယ်။ It is prohibited to buy, sell, or cultivate Datura plants. အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၁၉၅၀ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၆၅ ခုနှစ်အတွင်း၌ ပဒိုင်းသီးကို စားသုံးကြခြင်းကြောင့် လူပေါင်း(၂၇၀၀)ကျော်ခန့် … Read more
နှာစေးနေတဲ့ သူတွေအတွက် ဆေးနည်းကောင်းလေး
နှာစေးနေတဲ့ သူတွေအတွက် ဆေးနည်းကောင်းလေး လန်ဒန်မှာ ပညာတော်သင် ရောက်နေတဲ့ ဆရာဝန်လေး တစ်ယောက်က နှာစီးနေလို့ လန်ဒန်မှာ နေတဲ့ ဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက်အိမ် အလည်သွားရင်း ဘာဆေး သောက်ရမလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ဆရာဝန်ကြီးက သူ့ဇနီးကို ငါစားနေကြ ဆေးလေး လုပ်ခဲ့ပါဦိးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ခဏကြာတော့ ကြက်သွန်ဖြူ မီးဖုတ်တွေ ပန်းကန်လေးနဲ့ ထည့်ယူလာပါတယ်။ အဲဒါစား ဘာဆေးမှ သောက်စရာ မလိုဘူးတဲ့။ စားပြီးတဲ့ နေ့ကစပြီး သက်သာသွားပါသတဲ့။ အခုလည်း နှာတစ်ချိန်လုံး စီးနေတဲ့သူကို ဒီနည်းပေးပြီး စားခိုင်းတော့ သက်သာလို့ပါတဲ့ ခင်ဗျာ။ Credit : Dr.Kyaw Swa Copy by La Wone Eain နှာစေးနေတဲ့ သူတွေအတွက် ဆေးနည်းကောင်းလေး လန်ဒန်မှာ … Read more
တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရုံနဲ့ ပြစ်မျိုးမဲှ့မထင် အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့
တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရုံနဲ့ ပြစ်မျိုးမဲှ့မထင် အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရုံနဲ့ ပြစ်မျိုးမဲှ့မထင် အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ အလှပြင်ကြမယ် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးတည်းနဲ့ သင့်မျက်နှာပေါ်က အဖုအစက်အပျောက်တွေကို ပျောက်ကင်းစေပြီး ချောမွေ့တဲ့အသားအရေရရှိစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ပြောပြလိုပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးကတော့ ခရမ်းချဉ်သီး နနွင်းမှုန့် ပြုလုပ်နည်း ၁။ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးကို နှစ်ခြမ်းခွဲလိုက်ပါ။ ၂။ ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာ နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ၃။ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်ခြမ်းကို နနွင်းခွက်ထဲ နှစ်လိုက်ပါ။ ၄။ ဒီခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ သင့်အရေပြားကို စက်ဝိုင်းပုံစံပွတ်ပေးပါ။ ညင်ညင်သာသာလေးပွတ်ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာက ခရမ်းချဉ်သီးရေထွက်လာစေပါတယ်။ ၅။ ခရမ်းချဉ်သီးက ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်စီနဲ့ စစ်ထရစ်အက်ဆစ်ကြွယ်ဝပါတယ်။ ဒီဓာတ်တွေက သင့်အရေပြားကို သန့်ရှင်းတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးပြီး ချောမွေ့စေပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်က ချေးတွေကို … Read more
ဆီပူလောင်ရင် ချက်ချင်းလုပ်ပါက အမာရွတ်တောင်မကျန်စေတဲ့ သဘာဝနည်း
ဆီပူလောင်ရင် ချက်ချင်းလုပ်ပါက အမာရွတ်တောင်မကျန်စေတဲ့ သဘာဝနည်း ဆီပူ ၊ရေနွေးပူ တို့နဲ့အမြဲတစေ ထိတွေ့နေရသော အိမ်ရှင်မများအတွက်…. ဒီနည်းလေးက တကယ့်ကိုအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီပူလောင်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၊ ဆေးနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ် ဆိုပေမယ့် အခုဖော်ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးကတော့ ထူးခြားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။ နည်းလမ်းကရိုးရှင်းလွန်းလို့ လျှော့မတွက်နဲ့နော်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ။ သူကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ လက်တွေ့နည်းပါလို့ပြောပါရစေ။ ဆီပူလောင်ခဲ့သော်…. ဆီပူလောင်သည့်နေရာ ကို ဆီစိမ်း (အသုံးမပြုရသေးသည့်ဆီ)ဖြင့် ရွှဲနစ်နေအောင် ချက်ချင်းလိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်ခန့်ကြာလျှင် သက်သာပျောက်ကင်းသွာပါလိမ့်မည်။ ရေကြည်ဖောင်းမထ အမာရွတ်ကျန်ခဲ့မှာစိုးရိမ်စရာမလိုသည့်အတွက် ဒီနည်းလမ်းကို ယုံကြည်စွာနဲ့အသုံးပြုလိုက်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ…. ။ မေတ္တာဖြင့်…ပြန်လည်မျှဝေပေးပါနော်.. မူရင်းရေးသားသူ နှင့် ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်များအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။ ဆီပူ ၊ရေနွေးပူ တို့နဲ့အမြဲတစေ ထိတွေ့နေရသော အိမ်ရှင်မများအတွက်…. ဒီနည်းလေးက တကယ့်ကိုအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီပူလောင်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး … Read more
ဆရာကြီးဦးရန်အောင်ပြောတဲ့ အပူငြိမ်းဖို့အတွက် ရေချိုးနည်းနှင့်ခေါင်းလျှော်နည်း
ဆရာကြီးဦးရန်အောင်ပြောတဲ့ အပူငြိမ်းဖို့အတွက် ရေချိုးနည်းနှင့်ခေါင်းလျှော်နည် အပူငြိမ်းဖို့အတွက် ရေချိုးနည်းနှင့်ခေါင်းလျှော်နည်း အပူငြိမ်းဖို့အတွက် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဆရာကြီးက ပြောချင်တယ်။ ရေကို စနစ်တကျ သုံးပါလို့ ပြောချင်တယ်။ ရေဟာ ဘာကို ငြိမ်းစေသလဲ။ အပူကို ငြိမ်းစေတာပါ။ ရေကို အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ရှေးအခါက ပြောခဲ့တဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို ဆရာကြီးက အခုဒီမေးခွန်းတွေ ပြန်ဖြေရင်း ပြန်ဖြေရင်းနှင့် တန်ဖိုး ပိုထားတတ်လာတယ်။ ဒီစကားလေးနော်။ ဟယ် .. ရေတိမ်မှာ နစ်တာပဲလို့ ပြောတယ်နော်။ ရေတိမ်မှာ နစ်တယ်ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ တင်စားပြီးပြောတာ။ ရေတိမ်မှာ နစ်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်သေနိုင်ပါ့မလဲ။ ဥပမာ – ခြောက်လက်မလောက်ရှိတဲ့ လေးလက်မလောက်ရှိတဲ့ ရေတိမ်လေးထဲ နစ်လို့တော့ မသေနိုင်ပါဘူး။ ပြောချင်တဲ့အနှစ်သာရက ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ရေကို စနစ်တကျ မသုံးစွဲတတ်တာ။ … Read more
ဘယ်သူက မေပန်းချီလဲ၊ ဘယ်သူက ဘေဘီမောင်လဲ၊ ဘေဘီမောင်ဘဲလုပ်တော့မယ်၊ အကုန်ဖွင့်ချမယ်အကုန်လာကြည့်
ဘယ်သူက မေပန်းချီလဲ၊ ဘယ်သူက ဘေဘီမောင်လဲ၊ ဘေဘီမောင်ဘဲလုပ်တော့မယ်၊ အကုန်ဖွင့်ချမယ် အကုန်လာကြည့် #မေပန်းချီ #ဘေဘီမောင် Video -Dàw Ķhïn Làý Hťeť ကဲသိချင်ရင်လာခဲ့ကြတော့နော်အကုန်ရှင်းပြမယ်ပီးရင်အကြိုက်ဆဲနေစရာမရှိလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရအောင်ကျွန်မတိုကအစထဲကစက်ချုပ်ရုံမှာနေခဲ့တာပါရှင့် ဘယ်သူက မေပန်းချီလဲ၊ ဘယ်သူက ဘေဘီမောင်လဲ၊ ဘေဘီမောင်ဘဲလုပ်တော့မယ်၊ အကုန်ဖွင့်ချမယ် အကုန်လာကြည့် #မေပန်းချီ #ဘေဘီမောင် Video -Dàw Ķhïn Làý Hťeť ကဲသိချင်ရင်လာခဲ့ကြတော့နော်အကုန်ရှင်းပြမယ်ပီးရင်အကြိုက်ဆဲနေစရာမရှိလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရအောင်ကျွန်မတိုကအစထဲကစက်ချုပ်ရုံမှာနေခဲ့တာပါရှင့် ဘယ်သူက မေပန်းချီလဲ၊ ဘယ်သူက ဘေဘီမောင်လဲ၊ ဘေဘီမောင်ဘဲလုပ်တော့မယ်၊ အကုန်ဖွင့်ချမယ် အကုန်လာကြည့် #မေပန်းချီ #ဘေဘီမောင် Video -Dàw Ķhïn Làý Hťeť ကဲသိချင်ရင်လာခဲ့ကြတော့နော်အကုန်ရှင်းပြမယ်ပီးရင်အကြိုက်ဆဲနေစရာမရှိလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရအောင်ကျွန်မတိုကအစထဲကစက်ချုပ်ရုံမှာနေခဲ့တာပါရှင့် ဘယ်သူက မေပန်းချီလဲ၊ ဘယ်သူက ဘေဘီမောင်လဲ၊ ဘေဘီမောင်ဘဲလုပ်တော့မယ်၊ အကုန်ဖွင့်ချမယ် အကုန်လာကြည့် #မေပန်းချီ #ဘေဘီမောင် Video … Read more
မြန်မာ့တပ်မတော်ကို 1965 ခုနှစ်ကတည်းက ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် နွဲ့နွဲ့စန်း(အခုမှမဟုတ်ဘူး)
မြန်မာ့တပ်မတော်ကို 1965 ခုနှစ်ကတည်းက ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် နွဲ့နွဲ့စန်း(အခုမှမဟုတ်ဘူး) ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုတစ်ခါမှာ ဆိုရင်တော့1965 ခုနှစ်ကတည်း ကမြန်မာ့ တပ်မတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင် နွဲ့နွဲ့စန်း အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် ၁၉၆၅ ခုနှစ်လောက်က ရှေ့တန်းရောက် တပ်မတော်သားများအားသွားရောက် ဖျော်ဖြေပေးသောပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်များ ဖြစ်သော တွံတေးသိန်းတန် ဓနုဖြူစိုးသိန်းတင်တင်မြ မာမာအေး စံရှားတင် နွဲ့နွဲ့စန်း ခေါင်ဂျီးတို့ ပါပါတယ်ဒဏ်ရာရ တပ်မတော်သား တယောက်အားသွားရောက် အားပေးသောအဆိုကျော် တင်တင်မြ ဆိုပြီးတော့လဲ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်စာဖတ် ပရိတ်သတ်ကြီးများ အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုတစ်ခါမှာ ဆိုရင်တော့1965 ခုနှစ်ကတည်း ကမြန်မာ့ တပ်မတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင် နွဲ့နွဲ့စန်း အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် ၁၉၆၅ ခုနှစ်လောက်က ရှေ့တန်းရောက် တပ်မတော်သားများအားသွားရောက် ဖျော်ဖြေပေးသောပြည်သူချစ် … Read more